Aragtida uu adduunku ka qabo Maraykan oo 'aad' isu badashay Trump ka dib - BBC News Somali
Aragtida uu adduunku ka qabo Maraykan oo 'aad' isu badashay Trump ka dib
Image caption Trump kama xishoodo in uu soo bandhigo aragtida uu ka qabo dalal badan oo caalamka ah, haddaba maxaaa isna laga aaminsan yahay?
Madaxweynenimada Donald Trump ayaa "saamayn wayn ku yeelatay sida uu adduunku u arko dalka Maraykanka", sida lagu sheegay daraasad ballaaran oo la sameeyay.
Daraasaddan waxaa sameeyay xarunta cilmibaarista ee Pew Research Center oo waraysi la yeelatay sannadkan in ka badan 40,000 oo ruux oo ku kala nool 37 dal.
Waxay ku soo gabogabaysay in siyaasaddaha madaxweynaha aysan "shacbiyad wayn ka lahayn caalamka".
Labadaas dal ayaa kala ah Israa'iil iyo Ruushka.
Sahankan ayaa dadka lagu sameeyay markii uu Obama dhamaystay siddeeddii sano ee uu xilka hayay, iyadoo Trump-na uu markaas uun xilka la wareegay - waxaa dadka la waydiiyay in ay kalsooni ku qabaan in madaxeynuhu uu si wanaagsan u maarayn doono arrimaha caalamka.
Waatan jawaabihii ay bixiyeen xulafada Maraykanka (iyo Ruushka)
Click to see content: trump_popularity_ws_languages_somali
Trump ayay wakhti yar ku qaadatay in uu sunto arrimaha caalamka - wuxuuna si cad u sheegay in dalalka ku jira Gaashaan Buurta Nato ay bixitaan saami caddaaladda waafaqsan, isaga oo ula jeeda in ay dhaqaale dheeri ah bixiyaan, sidoo kalana todobaadyadii dhawaa wuxuu dhiirigaliyay in dalalka Khaliijku ay go'doomiyaan dalka Qadar.
Saddex dal oo kali ah ayayna aqlabiyadda dadkoodu taageereen go'aankaas kuwaas oo kala ah Israa'iil, Hungary iyo Ruushka.
Click to see content: trump_strongleader_ws_languages_somali
Dadka daraasadan lagu sameeyay oo gaaraya 40,447 oo xarrunta cilmibaarista ee Pew su'aalo waydiisay ayay jawaabahoodu sidaas u dhadhameen.
Dadka ayaa laga yaabaa in ay ka walaacsan yihiin waxa Trump uu uga dhigan yahay dalkooda, badankooduna waxaa laga yaabaa in ay u arkaan nin qalafsan oo halis ah - laakiin aysan taasi ka dhignayn in ay u malaynayaan in madaxwenenimadiisu ay saamayn ku yeelan doonto.